Hindiya: Dayn nus doolar ka yar ayaa waalid loo dilay - iftineducation.com
Hindiya: Dayn nus doolar ka yar ayaa waalid loo dilay
aadan21 / July 29, 2016
iftineducation.com – Nin ka soo jeeda qawmiyadda Dalit ayaa isaga iyo xaaskiisaba loo dilay muran ka dhashay 15 rupees ama wax ka yar nus doolar dayn ah oo lagu lahaa, arrintaasi waxay ka dhacday Uttar Pradesh.
Booliiska ayaa sheegay in nin dukaan le ah uu dilay lamaanahaas Khamiistii, kaddib markii ay dalbadeen in ay u baahan yihiin in wakhti uu siiyo si ay isaga bixiyaan lacagta buskut ay caruurtooda u amaahdeen.
Dukaanlihii ayaa la xiray.
Qawmiyadda Dalits waxaa horay loogu yaqaanay lama taabtaanka waxayna ku jiraan dabaqadda ugu hoosaysa bulshada.
Booliiska ayaa wakaaladda wararka ee Hindiya ee Press Trust u sheegay in dhacdadu ay ka dhacday degmada Mainpuri.
Ashok Mishra oo ah ninka dukaanka leh ayaa labada qof ee uu dilay ka dalbaday in ay bixiyaan lacagta saddex baakad oo buskut ah oo ay u amaahdeen saddex caruur ah oo ay dhaleen maalmo ka hor sida ay wararku sheegeen.
Lamaanaha ayaa la sheegay in ay dalbadeen in ay siiyaan lacagta marka ay soo qaataan lacagta ay ka soo helaan xoogsigooda maalin laha ay ayna bixiyaan isla galinka dambe ama fiidkii.
Mishra ayaa sii waday in uu ku qaylyo oo lacagtiisa waydiisto, lamaamihii ayaase bilaabay in ay u sii socdaan dhanka shaqadooda. Intaas kaddib Mishra ayaa galay gurigiisa oo u dhawaa oo la soo baxay faas kaddibna dilay Bharat kaddibna wuxuu weeraray oo iyadana ku daray Mamta oo oo isku dayaysay in ay ninkeeda badbaadiso.
Lamaanihii ayaa ku dhintay isla goobtii sida uu Nadeem u sheegay wargayska The Indian Express
Qawmiyadda Dalit ayaa jidgooyooyin dhigay wadooyinka tuulada waxayna ka mudaaharaadeen dhacdadaasi
Waa maxay xiriirka ka dhaxeeya qofka Somaliga ah iyo dhulka uu ku noolyahay